မော်ဒယ် #: F-7792
အရွယ်အစား: အနတ္တ: 1800*600*450မီလီမီတာ
ကြည့်မှန်:5mm Sliver Mirror
အရောင်: As picture, Customized is very welcomed
ပစ္စည်း: 5mm Silver LED Mirror/ Mirror Cabinet
A1: ကျနော်တို့ဘောင်အဘို့အစိုင်အခဲသစ်သားကိုအသုံးပြုပါ, နောက်ကျောများအတွက်အထပ်သား&ဘေးထွက် panel ကို.
Q2: Frank က OEM ပေးပါသလား&ODM ဝန်ဆောင်မှု?
A2: OEM ကြိုဆိုပါတယ်&ODM အမှာစာ, ကျနော်တို့နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များရှိသည် 13 OEM အတွက်အတွေ့အကြုံ&ODM ဝန်ဆောင်မှု.
A3: ပုံမှန်အားဖြင့် 35 ရက်ပေါင်း.
A4: အနတ္တ: ပျားလပို့ကိုဘုတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူစံပုံး. ကောင်တာ: အတွင်းပိုင်းပူဖောင်းပုံစံနှင့်အတူစံပုံး, သစ်သားဘောင်သို့မဟုတ် external.Packaging နည်းလမ်းများ ustomized နိုင်ပါသည်သစ်သားအမှုနှင့်အတူထုပ်ပိုး.
A5: 30% အပ်ငွေအဆင့်မြင့်သည်, 70% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီချိန်ခွင်လျှာ.
A6: ဟုတ်တယ်, သင်လုပ်နိုင်သည်.
A7: ဖရန့်အခမဲ့သတ္တုလိုဂို provde, စတော့ရှယ်ယာ, ထုတ်ကုန်ပုံစံ, သင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်စာရင်းဒီဇိုင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံများ.
If you have some problems about Double basin design modern MDF bathroom vanity cabinet with led light mirror F-7792, or want to know more details about Buthtub,Mordern style,အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်,စသည်တို့. Welcome to contact us!
အနိမ့်စျေးအမေရိကန်စတိုင်ရေချိုးခန်း Vanity ယူနစ်
Sink နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်အမေရိကန်စတိုင်ရေချိုးခန်း Vanities
Oak Wood ရှိရှေးဟောင်းစတိုင်ရေချိုးခန်း Vanity ဥရောပစတိုင်